Maamulka Shabeelaha Dhexe iyo shacabka oo ammaanka iska kaashanaya
Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo dadka deegaanka ayaa iska kaashanaya ammaanka gobolka oo qaybo ka tirsan ay ku sugan tahay maleeshiyada al-Shabaab.
Afhayeenka maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ee dowladda Soomaaliya Daa’uud Xaaji Ciiro ayaa warbaahinta u sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay kulamo la lahaayeen odayaasha beelaha dega gobolka, gaar ahaan magaalada Jowhar, isla markaana ay kala hadlayeen sidii ammaanka la isaga kaashan lahaa.
Wuxuu sheegay in odayaasha beelaha qaarkood ay u ballan-qaadeen in maamulka ay kala shaqeeyaan ammaanka iyo sidii dhallinyarada la marin habaabiyay looga soo saari lahaa maleeshiyada al-Shabaab.
Wararku waxay sheegayaan in dhallinyaro ka tirsanaa al-Shabaab ay odayaal beeleedyo ku wareejiyeen ciidamada dowladda, kaddib markii ay ku qanciyeen inay ka haraan falal-ka lagu dhibaataynayo shacabka.
Dhinaca kale, magaalada Jowhar oo sagaalkii bishan laga saaray al-Shabaab ayuu maamulka gobolka u sameeyay ciidamo gaar ah oo ammaanka suga, iyadoo afarta xaafadood ee magaalada ay ka kooban tahay laga sameeyay xafiisyo isku xira hay’adaha ammaanka gobolka iyo shacabka.
« Tahriibayaal Soomaaliyeed oo ku dhintay shil ka dhacay duleedka Magaalada Tripoli ee Xarunta dalka Liibiya
Wasiirka,Arr,Dibadda, Fawsiyo Yuusuf oo booqash rasmi ah ku timid London, kana hadashay shirweyne ka dhacaya London. »